လူပြန်စုံလာမှုနဲ့အတူ ဗလင်စီယာကို အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ပွဲက ဘာစီလိုနာသားတို့ရဲ့ စကားသံများ - xyznews.co
လူပြန်စုံလာမှုနဲ့အတူ ဗလင်စီယာကို အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ပွဲက ဘာစီလိုနာသားတို့ရဲ့ စကားသံများ
ဘာစီလိုနာ အသင်းဟာ ယမန်နေ့ညက ဗလင်စီယာ အသင်းနဲ့ ရင်ဆိုင် ကစားခဲ့ပြီး ၃-၁ နဲ့ အနိုင် ရရှိခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီပွဲဟာ ဘာစီလိုနာ အတွက် ရလဒ်ပိုင်း မှာသာမက စိတ်ဓါတ်ပိုင်းကိုပါ ကောင်းကျိုးတွေ သက်ရောက် စေခဲ့ပါတယ် ။
ဒဏ်ရာ ကနေ ပြန်လည် သက်သာလာတဲ့ အန်ဆုဖာတီ ရဲ့ ဂိုးသွင်း နိုင်မှု ၊ အဂွေရို ရဲ့ ဘာစီလိုနာ အတွက် ပထမဆုံး ကိုယ်စားပြု ပါဝင် နိုင်မှုတွေဟာ ရှေ့ဆက်ရမယ့် ပွဲတွေ အတွက် စိတ်ခွန်အား ဖြစ်စရာတွေ ဖြစ်ခဲ့ရ ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ဘာစီလိုနာ ဂိုးမသွင်းနိုင်တာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ဖိလစ်ပီ ကော်တင်ဟို ဟာလည်း ဒီပွဲမှာ ဂိုးပေါက် ပြန်လည် ရှာဖွေ နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ကျန် ၁ ဂိုးကိုတော့ ဒီရာသီ ဘာစီလိုနာ ရဲ့ အားအထားရဆုံး မမ်းဖစ် ဒီပိုင်းက သွင်းယူ ပေးသွားခဲ့တာပါ ။
“ကောင်းမွန်တဲ့ ပွဲဦးထွက် ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ၊ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ခဲ့လို့ ပါပဲ ။ ဒါကမှ တကယ့် အရေးအကြီးဆုံးပါ ။ ပရိသတ်တွေ ဆီက ( Kun . . . Kun ) အော်သံတွေကို ကြားရတာ တကယ့်ကို ဝမ်းသာစရာ ကောင်းပါတယ် ။ အခု သူတို့ရဲ့ ချစ်ခြင်း မေတ္တာတွေ ကို ပြန်လည် ပေးဆပ်ဖို့ အလှည့် ကျလာပါပြီ” လို့ ဒုတိယပိုင်းမှာ လူစားလဲ ဝင်ရောက်ကာ ဘာစီလိုနာ ကစားသမားဘ၀ စာမျက်နှာသစ်ကို ဖွင့်လှစ် လိုက်တဲ့ ဆာဂျီယို အဂွေရို က ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဖိလစ်ပီ ကော်တင်ဟို ကတော့ သူ့ရဲ့ သွင်းဂိုးဟာ ဒီနှစ်တွေမှာ သူ ခံစား နေရတဲ့ စိတ်ဝေဒနာတွေ ကို များစွာ သက်သာ လျော့ပါးသွား စေခဲ့တယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို လာခဲ့ ပါတယ် ။
“ဒီဘက်နှစ်တွေမှာ ကျွန်တော် ခံစားခဲ့ရတာကို အားလုံး သိကြမှာပါ ။ အခုဒီဂိုးက ကျွန်တော့ကို အများကြီး စိတ်သက်သာရာ ရစေခဲ့ ပါတယ် ။ အသင်းက နိုင်ပွဲ ရခဲ့သလို ကျွန်တော်လည်း ဂိုးအကြာကြီး မသွင်း နိုင်တာကို အဆုံးသတ် ခဲ့ပါပြီ ။ နောက်လာမယ့် ပွဲတွေ မှာလည်း ဒီပုံစံကောင်းကို ဆက်ထိန်းထား နိုင်ဖို့ ကြိုးစား သွားမှာပါ ။
အရင်တုန်းက ကိစ္စတွေ က နာကျင်စရာကောင်းပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် အခုဒါတွေက အမာရွတ်တွေ အဖြစ် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါပြီ” လို့ ကော်တင်ဟို က ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ နည်းပြကြီး ကိုးမန်း ကတော့ ဂိုးသွင်းပေး ခဲ့တဲ့ လူငယ်လေး အန်ဆု ဖာတီ ကို ချီးကျုး ခဲ့ပြီး ဘာဆာ ဟာ ဖာတီ ကို သတိရနေတာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
“အသင်းက အရမ်းကောင်းတဲ့ ပုံစံကို ပြခဲ့ပြီး အနိုင်ရဖို့ ထိုက်တန် ခဲ့ ပါတယ် ။
အန်ဆု လို ကစားသမားမျိုးတွေကို ကျွန်တော်တို့ လိုအပ် နေတယ်လို့ အမြဲ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ် ။
အခုသူက ကျွန်တော်တို့ ဘာကြောင့် သူ့ကို လွမ်းဆွတ် သတိရနေသလဲ ဆိုတာကို သက်သေ ပြသွားခဲ့ ပါပြီ ။ သူ့ကို လူစားမလဲချင်ခဲ့ ပါဘူး ၊ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ ကြံ့ခိုင်မှု ကို ထည့်တွက် ရပါဦးမယ်” လို့ ကိုးမန်း က ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ဟာ လက်ရှိ မှာ ရမှတ် ၁၅ မှတ် နဲ့ အမှတ်ပေး ဇယားရဲ့ အဆင့် ၇ နေရာမှာ ရပ်တည်နေပါတယ် ။ လာမယ့် ကြားရက် မှာတော့ ဒိုင်နမိုကိဗ် နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု ပွဲစဉ်ကို ကစားရမှာ ဖြစ်ပြီး အဲ့ဒိ နောက်မှာတော့ ပြည်တွင်း မဟာပြိုင်ဘက် ရီးရဲ မက်ဒရစ် နဲ့ လာမယ့် အပတ် ပိတ်ရက်မှာ ကစားရမှာပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ကို ဂိုးသွင်းရုံမက စကားလုံးတွေနဲ့ပါ ထိုးနှက်လိုက်တဲ့ သောမတ်စ် မူလာ
အဆုံးအဖြတ်ပွဲ ကစားရမယ့် လက်စတာစီးတီးနဲ့…ယူရိုပါလိဂ် အုပ်စုနောက်ဆုံး ပွဲစဉ်တွေကို ခန့်မှန်းပေးလိုက်တဲ့ မိုက်ကယ်အို၀င်
အဆုံးအဖြတ်ပွဲ ကစားရမယ့် လက်စတာစီးတီးနဲ့…ယူရိုပါလိဂ် အုပ်စုနောက်ဆုံး ပွဲစဉ်တွေကို ခန့်မှန်းပေးလိုက်တဲ့ မိုက်ကယ်အိုဝင်
Previous Article နယူးကာဆယ် ပရိသတ်ရဲ့ အခြေအနေ ၊ အဂွေရို ရဲ့ ဘာဆာ ပွဲဦးထွက် ၊ နိုင်ပွဲဆက်တဲ့ နာပိုလီ တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
Next Article ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီက မန်ယူနိုက်တက်တို့ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အပြောင်းအရွေ့ အမှားကို ထောက်ပြလိုက်တဲ့ အလန်ရှီးယားရား